ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါ - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 11/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါသည် နှစ်ပေါင်း များစွာကြာ ကောင်းစွာနားမလည်ခဲ့သော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါဆိုတာ တကယ်တော့ ဘာလဲ။ အောက်ပါ ဆောင်းပါးတွင် အချက် အလက်များကို ပေးပါလိမ့်မည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါကို အပူပိုင်းဒေသ တွင် ဖြစ်သော အူရောဂါဟုလည်း ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အညစ်အကြေးများ ပါးစပ်မှဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးသော နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အူသိမ်နှင့် အူ villi များကို ရောင်ရမ်း စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အရေးပါသော ကြားအခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ ကလေးများတွင် ရေရှည် အာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုအချို့ရှိသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မကြာသေးမီ ကမှ သိရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ ထိုရောဂါသည် လူထောင်ပေါင်း များစွာကို နက်ရှိုင်းစွာ ထိခိုက်စေသည်ကို လူထုက သတိပြု လာသည်။ သို့သော်လည်း ရောဂါဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်း ကို မသိရှိသေးပါ။ ယနေ့တိုင် တိရစ္ဆာန် ပုံတူလဲ မရှိသေးပါ။ ၎င်းသည် သိပ္ပံပညာ ရှင်များနှင့် သုတေသနပြုလုပ်သူ များအတွက် ဤရှုပ်ထွေးသော ရောဂါကို ပိုမိုသိရှိရန် ခက်ခဲစေသည်။
အာဟာရ ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးများ မရနိုင်သော အခါ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ လူများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါကို ခံစားရနိုင်သည်။ အူမှ စုပ်ယူသော လုပ်ငန်းများလည်း ပျက်စီးပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါအပေါ် မကြာသေး မီက တွေ့ရှိချက်များကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ ဤ ကောင်းစွာ နားမလည်သော အခြေအနေအတွက် အကျဉ်းချုပ် လည်း ဖော်ပြထားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါအပေါ် မကြာသေးမီ က တွေ့ရှိချက်များ
ယခုအခါ၌ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါ အကြောင်း နားလည်မှုအများစုသည် ဆယ်စုနှစ်အကြာက လုပ်ဆောင်ခဲ့ သော လေ့လာမှုများမှ ကောက်နုတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤရောဂါ၏ ထူးခြားသော ရောဂါဆဲလ် လက္ခဏာ များအပေါ် လေ့လာမှုအသစ်အချို့ လုပ်ထားသော်လည်း လက်ရှိတွင် ရလဒ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါရှိမရှိ သိရန် အူမှ တစ်ရှူးစ ယူခြင်းကို သုံးသည်။
အမျိုးမျိုးသော ဇီဝအမှတ်အသားများကို ရောဂါအတွက် စစ်ဆေးသည်။ အချက်အလက်များမရှိခြင်းမှာ ကြိုးစားလုပ် ကိုင်နေသော်လည်း စံပြုနိုင်သော ဇီဝအမှတ်အသား မထုတ် နိုင်သော်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါ၏ ရလဒ်ကို တိုးတက်စေရန် လေ့လာမှုအချို့ကို ဆောင်ရွက်နေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါ၏ အခြေခံ ရောဂါဆဲလ်အကြောင်းကို အရင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သုတေသန ပညာရှင်များသည် ဤရောဂါ၏ ဇီဝကမ္မကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် အဆင့်မြင့်သော ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းများ လုပ်ကိုင်နေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်သော အူရောဂါတွင် ရောဂါဖြစ်စဉ် ဘယ်လိုကွာခြားသည်ကို ပြနိုင်သော ဇီဝအမှတ်အသားများကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ယနေ့ထိတိုင် စံနှုန်းမီသော ဇီဝ အမှတ် အသားမရှိသေးပါ။ အလားအလာကောင်းသော ဇီဝ အမှတ် အသားအချို့ကို လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးတွင် အတည်ပြုရန် ကြိုးစားနေသည်။
ကောင်းစွာနားမလည်သော ဤရောဂါ၏ ရင်းမြစ်ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ရန် လေ့လာမှုအချို့ ဆောင်ရွက်နေသော် လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အူရောဂါကို သိပ္ပံပညာ ရှင်များနှင့် သုတေသနပညာရှင်များက အဆင့်မြင့်ပြီး အနည်း ငယ်သာ နားလည်သေးသော အကြောင်းအရာတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဇီဝ အမှတ်အသားများကို စံပြုနိုင်သော အခြေအနေရောက်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
Diet and specific microbial exposure trigger features of environmental enteropathy inanovel murine model. http://www.nature.com/articles/ncomms8806Accessed March 22, 2017
Environmental Enteropathy: Critical implications ofapoorly understood condition. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372657/Accessed March 22, 2017
Environmentalenteropathy.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26574871Accessed March 22, 2017
နေ့တိုင်း ဝမ်းသွား ဖို့ လိုသလား။
မနက်တိုင်းမှာ ဝမ်းပုံမှန်သွား စေဖို့